BELLE HAVEN Penthouse avec vue mer - I-Airbnb
Trou aux biches Mont Choisy Beach Road, Pamplemousses District, i-Mauritius
Ifulethi elilodwa elinekamelo lokulala elinendawo yokubuka ulwandle, ikamelo lokuphumula elinekhishi elintofontofo nelivulekile, ikamelo lokugezela elingamamitha angu-60 sq we-Terrace. I-shower yangaphandle, isihlalo esigoqekayo, imibhede yelanga engu-2, itafula labantu abangu-4, ekuhlobiseni olwandle, nokushona kwelanga okuphawulekayo njalo kusihlwa.
Ngaphansi kwemizuzu engu-5 uhamba ngezinyawo ukuya ebhishi elihle kakhulu lase-Mauritius, Trou aux Biches. Ukuhlanza okulula kuzokwenziwa njalo ngemva kwezinsuku ezingu-2 ngaphandle kwamaSonto namaholide omphakathi. Izitolo nezindawo zokudlela ezizungeze i-.
I-Belle Haven Luxury Apartments ihlongoza kuphela phezulu kwezindlu zomugqa, ngaphansi kwemizuzu emi-5 uhamba usuka ogwini oludumile i-Trou aux Biches, kanye nemizuzu engaphansi kwemi-5 uhamba ngezinyawo usuka ebhishi laseMont Choisy. Uzojabulela i-swimming pool yesakhiwo kanye nama-subed azungezile.
Uzokwamukelwa ngosuku nguNicholas, i-concierge, ozobe esenkonzweni yakho nsuku zonke.
I-penthouse inekamelo lokulala elingu-1 elinombhede olingana nenkosi, igumbi lokugezela elingu-1 elineshawa, okomisa izinwele, okusesefa, oku-ayina, amathawula ahlanzekile namathawula olwandle, ikhabethe elikhulu. Umbhede ongusofa kanye ne-TV egumbini lokuphumula, nekhishi elivulekile, neketela, i-toaster nomshini wekhofi, isiqandisi, umshini wokuwasha. Ekugcineni, kodwa okungenani, amathala angu-2, owodwa kwangu-60 m² aneshawa yangaphandle, itafula namabhentshi kanye nemibhede yelanga emi-2. Ukubuka kolwandle.
I-Trou aux biches beach ngaphansi kwemizuzu engu-5 uhamba ngezinyawo.
I-Mont Choisy beach ngaphansi kwemizuzu eyi-10 uhamba ngezinyawo. Kuwo womabili amabhishi, uzobe ujabulela imisebenzi yamanzi (ukushushuluza emanzini, isikebhe sengilazi, uhambo lwesikebhe). Isikole se-Divers centers, izitolo, izindawo zokudlela, amabha azungeze isakhiwo, ngaphansi kwamaminithi angu-5 ukuhamba.
Isuphamakethe encane iseduze, kanti nesuphamakethe enkulu i-"PoPo" ikude ngamakhilomitha angu-7. Isikhungo seGrand Baie ku-10km.
Ukungena kungo-2pm. Bheka ngo-11am. U-Nicholas uzokwamukela futhi akusize noma nini.
Ifulethi lizohlanzeka njalo ezinsukwini ezi-2 ngaphandle kwamaholide nezimpelasonto, mahhala.
Hlola ezinye izinketho ezise- Trou aux biches Mont Choisy Beach Road namaphethelo